Filtrer les éléments par date : mardi, 06 avril 2021
Pilo kely : Ary angaha tsy ny mpanohitra indray no atao vakisiny voalohany
Ireo mpanohana ny fitondrana indray no hita miazakazaka manao vakisiny iarovana amin'ny Covid-19 mialoha, misy mitsaitsaika manao vakisiny any ivelany, ary ny vahoaka Malagasy mba oviana ny azy ?
mardi, 06 avril 2021 19:33
Covid-19 : Olona 3 no lavo, 271 manana fahasarotana ny 05 aprily 2021
Miisa 165 ireo olona vaovao voatily fa mitondra ny tsimok'aretina coronavirus ny 05 Aprily 2021 tamin'ny fitiliana niisa 528 natao, izay mitsinjara ho :
Alaotra Mangoro 2
Haute Matsiatra 1
Atsimo Andrefana 4
Mikatona ny fitateram-bahoaka amin'ny RN5 manomboka ny 08 aprily, fa ireo fiara mpitatitra entana ihany no afaka mivezivezy mampitohy ny faritra Atsinanana sy Analanjirofo ary olona 3, hatramin'ny mpamily, ihany no azony entina.
Tsy anisan’ireo faritra nambaran’ny fanjakana fa mihidy Analanjifo, saingy tafiditra amin’ny ady tsy hiparitahan’ny valanaretina Covid-19 io fepetra io, izay manankery mandritry ny 13 andro, araka ny filazana nataon’ny Sekretera jeneralin’ny fileovana ny 5 aprily 2021.
Hotanterahina ny alakamisy 8 aprily 2021 izao ny lanonana ara-pitsarana hanaovan’ireo mpikambana vaovao sivy mianadahy ao amin’ny Fitsarana avo momba ny Lalampanorenana na HCC, fihanianana.
Solontenan’ny filohan’ny Repoblika ny telo amin’izy ireo, nofidin’ny solombavambahoaka ho solontenan’ny Antenimieram-pirenena ny roa, solontenan’ny Antenimierandoholona ny roa, ary solontenan’ny Filankevitra ambonin’ny mpitsara ny roa.
mardi, 06 avril 2021 17:10
Ambodin'Isotry : Mikorontana ny mponina noho ny fitsinjarana ny vary mora
Mikorontana ny mponin'Ambodin'Isotry, Antetezana afovoany sy ny manodidina amin'ny fitsinjarana ny "Vary Mora".
Miantso ny tompon'andraikitra ny mponina ety an-toerana mba hanara-maso ireo mpizara izany.
Raha "ticket" miisa 100 no nampanantenaina dia zara raha 60 no azon'izy ireo, izay tsy fantatra hoe omena an'iza.
Nodimandry teo amn’ny faha-81 taonany i Berthin Andriamiharinosy. Anisan'ireo mpisehatra sy mpankafy fanatanjahantena i Berthin Andriamiharinosy, kintan’ny taranja handaball.
Zokiolona indrindra tamin’ny delegasiona Malagasy nandray anjara tamin’ny Lalaon’ny Nosy andiany faha-9 natao tao La Réunion tamin’ny 2015 i Berthin Andriamiharinosy ; 75 taona izy tamin’izay.
Namoaka asa-soratra sy tahirin-tsary maromaro mitantara ny fanatanjahantena teto Madagasikara izy, anisan'izany ny boky "Football... quand tu nous tiens", nosoratany niaraka tamin'i Marius Rasoanaivo.
mardi, 06 avril 2021 08:50
Covid-19 : Tantsambo malagasy iray maty tatsy Seychelles
Mpiasa amin’ny sambo Belle Isle an’ny orinasa Sapmer, mpanjono thon aty amin’ny ranomasina indianina sy Seychelles iny ilay tantsambo Malagasy.
Voan’ny Covid-19 izy, ary nisy tantsambo iray hafa, teratany indoneziana voa toa azy ihany koa.
Nampidirina hopitaly tao Mahé izy roalahy ireo ny herinandro lasa iny, saingy tsy tana fa namoy ny ainy avokoa.
Ambila Lemaitso : Mpanao vakansy efatra mianadahy maty an-drano
Tanora 5 miandahy no natelin’ny ranomasina tao Ambila Lemaitso ny andron’ny Alatsinainin’ny Paka 2021. Avotra ny iray ka tafakatra an-tanety. Tovovavy roa, 16 sy 17 taona ary zazalahy 20 taona no nindaosin`ny fahafatesana, ary tovolahy 25 iray no mbola karohina.
Andiana mpanao vakansy mivahiny any Manambato izy ireo, no tonga mitsangatsangana tany Ambila Lemaitso dia izao tra-doza izao.
Nalefa Kanota any Manambato namonjy ny fianakavinany ireo faty efa hita ; mbola manohy ny fikarohana ilay tovolahy iray natelin’ny ranomasina kosa ny Fokonolona ao Ambila Lemaitso.